Man City oo Barcelona kula loollameysa xiddig lagu tilmaamo Neymar-ka cusub oo ka tirsan Ajax – Gool FM
Man City oo Barcelona kula loollameysa xiddig lagu tilmaamo Neymar-ka cusub oo ka tirsan Ajax
Ahmed Nur October 27, 2021
(Manchester) 27 Okt 2021. Kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Manchester City ayaa diyaar ah inay ku hardamaan suuqa kala iibsiga bisha January iyagoo isku fara-saaraya loollanka saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara naadiga Ajax ee Anthony.
21-sano jirkan ayaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay qaab-ciyaareedka farsamada ku xardhan ee Neymar, waxaana uu qaybta sare kaga jiraa bartilmaameedyada kooxaha Barca iyo Man City ee suuqa soo aaddan.
Sida wararku ay sheegayaan, waxaa la yaab leh in madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta uu xiddigan usoo jeediyay macallinka Citizens ee Pep Guardiola oo ay saaxiibbo dhow yihiin.
Anthony oo garabka midig ka ciyaara ayaa qaab-ciyaareed aanan caadi ahayn kusoo bandhigaya horyaalka Eredivise ee dalka Netherlands isagoo sidoo kale indhaha caalamka soo jiitay saddexdii kulan ee uu u ciyaaray xulka Brazil.
Xiddiga Teeniska ee Nadal oo doortay xiddiga uu doonayo inuu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d'Or
Mino Raiola oo la weydiiyay mustaqbalka xiddiga Man United ee Paul Pogba... (Muxuu ku jawaabay?)